Ma xaq baa in ninka aan jecela
SAWIRO NAXDIN LEH:- Wararkii ugu dambeeyay qaraxyadii maanta gilgilay magaalada Muqdisho.
on September 07 2013 Waxaa faah faahin dheeraad laga helaayaa qaraxyo aad u culus oo maanta gilgilay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya gaar ahaan agagaarka guriga hooyooyinka ee degmada X/weyne, waxaana ay qaraxyadaas geeysteen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxyadaan oo ahaa laba qarax ayaa sida la sheegay mid ka mid ah waxaa loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay halka midka kalene uu ahaa nin waxyaabaha qarxa isku soo xiray oo halkaasi isku qarxiyay.
Waxaa inta la xaqiijiyay geeriyootay ku dhawaad 15 ruux, iyadoona sidoo kale ay dhaawacantay tiro intaasi ka badan, waxaana goobta ay qaraxyada ka dhaceen soo buux dhaafiyay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa nabad sugida iyo booliiska, iyagoona ka dib halkaasi howlgalo ka bilaabay.
Dadkii dhaawacmay ayaa waxaa loola cararay goobaha caafimaad ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo la sheegay qaarkood in dhaawacooda ay yihiin kuwa halis ah, iyadoona haatan xaaladooda caafimaad lala tacaalayo.
Qaraxyadaan ayaa waxay ahaayeen kuwa aad u culus islamarkaana laga wada maqlay inta badan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, iyadoona xaaladda goobtii uu qaraxa ka dhacay ay weli yaalaan hilbo go'goay.